Astaamaha, faa'iidooyinka iyo noocyada yoga | Ragga Stylish
Yoga waa nooc isboorti oo, sida kuwa kale sida yoga, Crossfit, waa moodada. Waxaa jira dad badan oo da 'walba leh waxaanan bilaabay inaan ku eego xiisaha qaar. Sababaha way ku kala duwan yihiin qof walba. Qaarkood waxay u maleynayaan inay tahay dhaqdhaqaaq jireed oo keliya kuwa kalena waxay u maleynayaan in anshax weyn lagu dhex dari karo layligan.
Waxaan kuu sharaxeynaa kuwan ka duwan Noocyada yoga iyo faa iidooyinka ay noo siiso caafimaadka.
1 Waa maxay yoga
2 Faa'iidooyinka yoga
3 Noocyada yoga
Waa maxay yoga
Markii aan ka hadlayno yoga kaliya ma xusno jimicsi fudud oo jir ahaaneed. Jimicsiga noocan ahi wuxuu leeyahay faa'iidooyin dhawr ah oo aad uga ballaadhan sida dadku u malaynayaan. Waxay ka caawisaa daryeelka iyo xoojinta jirka iyo maskaxda. Adoo maskaxda ku haya xoog waxaad ku hagaajin kartaa ruuxooda adoo ku tababbaranaya asana, neefsashada iyo fikirka. Waxyaabahani waxay ku midoobaan dhaqanka yoga. Sidaa darteed, dadka ku celceliya yoga si joogto ah waxay u muuqdaan inay leeyihiin xaalad caafimaad oo aad u caafimaad badan.
Marka la eego culeyska nolosha iyo laxanka degdega ah ee aan heysanno, joojinta in aan ka fiirsano oo aan si deggan u neefsanno ayaa faa'iido weyn u leh caafimaadka maskaxda. Marka lagu daro xaqiiqda ah inaan horumarin karno caafimaadkeena maskaxeed, waxaan bixin doonnaa faa'iidooyin jireed oo kala duwan. Hadafka yoga waa Baro inaad isku muujiso jirka iyo maskaxda shucuur ahaan iyo ruux ahaanba adoo adeegsanaya qaabab gaar ah. Waxaa jira noocyo yoga kaladuwan oo kuxiran da'da iyo xiisaha.
Waxaan mid mid u soo qaadaneynaa maxay yihiin faa'iidooyinka yoga:
Hagaaji dabacsanaanta. Tani waa waxtarka ugu fiican ee la ogyahay ee dhammaan. Markaad fulineysid qaabab kala duwan oo loo yaqaan asanas, dabacsanaanta ayaa fure u ah inaad si sax ah u gudan karto. Qaababkaan waxaad ku kala bixin kartaa dhammaan muruqyada jirka, adoo noqda kuwa sii dabacsan.
Hagaajinta booskayaga. Waxay siiyaan muuqaal wanaagsan hawl maalmeedkeena waxayna naga caawiyaan kahortaga caadooyinka xun. Wax badan oo ah in yoga ay noqotay daaweyn wax ku ool ah oo loogu talagalay xanuunka dhabarka ee joogtada ah ee ay keento qaab-liidata kuwa fadhiya muddo dheer.
Kordhinta feejignaanta Haddii aan si joogto ah u fekerayno inta aan isticmaaleyno qaabab dabacsan waxaan kordhin karnaa hufnaanta maskaxda. Tani waa fure marka ay timaado isku soo uruurinta.
Miisaanka oo yaraada. In kasta oo ayna runtii ku xidhnayn miisaanka oo yaraada, haddana waxay naga caawinaysaa inaan si aad ah uga taxaddarno jirkeenna isla markaana aan cunno cunno la socota jimicsiga. Ma ahan in sameynta yoga ay kaa caawin doonto inaad iska dhinto culeyska kaligiis, laakiin marka lagu daro cunnooyinka isdaba jooga ah waxaad ka warqabi kartaa muhiimadda caafimaadka. Qaab-dhismeedka qaarkood wuxuu hagaajiyaa marinka xiidmaha ee kuwa dhibaatooyinka leh.
Hagaajinta nasashada Waxaa jira qaabab yoga ah oo haddii si sax ah loo dhaqmo naga caawin kara inaan si fiican u seexanno. Intaa waxaa dheer, waxaan ka takhalusi karnaa welwelkayaga maalinlaha ah adoo si cad u fikiraya.
Kordhi nabada gudaha. Dad badan ayaa la muujiyaa oo waxay raadsadaan nabadgelyo gudaha iyagoo ku celceliya yoga. Layligani wuxuu gacan ka geysanayaa hagaajinta xakamaynta shucuurta oo u oggolaanaysa in lagu gaaro xaalad wanaagsan iyo isafgarad.
Waxay hagaajineysaa neefsashada. Mid ka mid ah dhinacyada muhiimka ah ee lagu fulin karo qaababka yoga si fiican ayaa ah neefsashada. Si sax ah loo neefsado waxaan sameyneynaa in si wanaagsan oo oksijiin ah loo qaado dhiigga.
Maskaxda ka saar. Ka hor intaadan seexan, ku celcelinta daqiiqado yar oo yoga ah ayaa naga caawin kara inaan ka takhalusno dhammaan xiisadaha soo kordhay inta lagu jiro maalinta.
Waxay hagaajisaa nolosha galmada. In kasta oo uusan si toos ah ula xiriirin, waxaa jira daraasado dhowr ah oo muujiyey inay hagaajin karto rabitaanka qanacsanaanta galmada ee dumarka iyo ragga labadaba. Tani waa sababta oo ah qulqulka dhiigga ee ballaadhan ee xubnaha taranka.
Waxaan qori doonnaa noocyada kala duwan ee yoga iyo astaamahooda ugu waaweyn:
Hatha yoga: tani waa tan ugu badan ee lagu dhaqmo. Waxay leedahay qaabab badan oo isugu jira daahirin, mantra, iyo hababka fekerka. Waxay ku shaqeysaa isku dheelitirka jirka iyo maskaxda iyada oo loo marayo qaababka. Maahan mid jidh ahaan aad u baahan laakiin waa mid ku habboon qof walba inuu bilaabo.
Ashtanga Vinyasa: Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa magaca dagaalyahan yoga. Waxaa si weyn loogu talinayaa kuwa doonaya inay horumariyaan xaalad jireed oo wanaagsan maxaa yeelay waxay bixisaa xoojinta dabacsanaanta. Saameyntan ama kuwa sidoo kale doonaya inay nastaan ​​oo ay raadsadaan ficil xoog leh oo qoto dheer isdaahirinta. Noocan yoga ah, neefsashadu waa furaha dhammaan qaabdhismeedka. Waxay ku habboon tahay dhalinyarada iyo dhalinyarada ama, guud ahaan, dhammaan dadka leh maskax deggan.
Kundalini: waxay ku saabsan tahay yoga ee miyirka. Dhaqankan waxaa ku jiri doona xoogaa shaqooyin cilmi baaris firfircoon oo lagu dhex daray heesaha mantra iyo fikirka. Fikradaha waxay soconayaan illaa kow iyo toban daqiiqo waxayna fure u yihiin isku xirnaanta ruuxa iyo cibaadada. Sidoo kale waa falsafada nolosha ee dad badani xambaaraan waxaana ka mid ah barashada caafimaadka, nafaqada, cilmu-nafsiga iyo aragtida aadanaha ee la xiriirta koonka iyo naftiisa.
Bikram yoga: Waa nooc ka mid ah yoga dhaqameed oo ay ku jiraan taxane 26 muuqaal ah oo lagu sameeyo in ka badan 90 daqiiqo. Yoga Tani waa in lagu sameeyaa qol leh heerkul sareeya (qiyaastii 42 darajo) si loo kululeeyo muruqyada loona gaaro dabacsanaan weyn. Sidan ayaan jidhka ugu sumeeynaa dhididka. Noocan yoga waxaa loo muujiyaa kuwa qaba xaalad jireed oo wanaagsan oo doonaya inay hagaajiyaan dabacsanaanta.
Acroyoga: dhaqankani wuxuu isu keenayaa acrobatics, qoob ka ciyaarka iyo mararka qaarkood, duugista Thai. Waxaa lagu shaqeyn karaa taabashada ama dhulka waxayna u oggolaaneysaa gacmaha iyo lugaha inay yeeshaan xasillooni iyo taageero ugu badnaan. Dhaqankeedu waa mid xad dhaaf ah.
Yoga Iyengar: kiiskan, waxaan diirada saareynaa isku hagaajinta saxda ah ee jirka. Tani waa sababta oo ah waa in qaabkan la ilaaliyaa waqti ka dib. Waa nooc ka mid ah kuwa doonaya inay si sax ah u qabtaan qaababka kahor intaanay u gudbin noocyo kale oo yoga ka baahi badan. Waxay ku habboon tahay kuwa qoorta iyo / ama dhibaatooyinka dhabarka qaba.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto noocyada kala duwan ee yoga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Noocyada yoga
Timaha timaha ee Sergio Ramos